Philips Pure Essentials Collection Steamer HD9140/91 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Pure Essentials Collection Steamer HD9140/91
The Philips steamer with Flavour Booster provides your food with great aromas of herbs and spices. You can prepare favourite soup, stew, porridge, rice and more in the XL steaming bowl. Press... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71362N/ASee more: Benchtop Appliances, Lifestyle, New Arrivals, Philips, Products, ShopFilter by: Steamers
Philips အမှတ်တံဆိပ် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဟင်းလျာတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ Flavour Booster ပါဝင်ပါတယ်။ Booster ထဲမှာ မိမိထည့်သွင်းလိုတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကိုထည့်သွင်းပြီး စတင်ပေါင်းခံလိုက်တာနဲ့ ပေါင်းအိုးရဲ့အပူရှိန်နဲ့အတူ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေရဲ့ မွှေးပျံ့တဲ့ရနံ့ဟာ အစားအသောက်တွေထဲကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး စားချင်စဖွယ်ဟင်းလျာတစ်ခွက် ဖြစ်လာစေမှာပါ။ ပေါင်းခံချက်ပြုတ်တဲ့အလုပ်ဟာ အနုပညာမြောက်တဲ့အတွက် Philips ပေါင်းခံအိုးမှာ အမျိုးမျိုးသော အစားအစာတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ Timer အချိန်မှတ်စနစ်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဆန်၊ ဉအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသားငါး စတဲ့အမျိုးမျိုးသော အစားအစာတွေကို သင့်တော်တဲ့ကြာချိန်နဲ့ ပေါင်းခံနိုင်တာကြောင့် အနံ့အရသာအပြင် ဗီတာမင်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်ဟင်းလျာတွေကို ချက်ပြုတ်နိုင်စေမှာပါ။ သင့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံး စွပ်ပြုတ်၊ စတူး၊ ဆန်ပြုတ်၊ ထမင်းပေါင်း နဲ့ အခြားသောဟင်းလျာအမျိုးမျိုးကို XL အရွယ်အစားရှိ ကြီးမားတဲ့ပေါင်းခံအိုးထဲမှာ ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ပေါင်းခံအိုး အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့အတွက် မိသားစုဝင်များပြားရင်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ အများကြီး ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ် အထိ ပေးထားပါတယ်။
This item: Philips Pure Essentials Collection Steamer HD9140/91 K139,000